इण्डीयाले नाकाबन्दी लगाउँने आशंकाकै विच चिनले दियो खुशिको खबर !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/इण्डीयाले नाकाबन्दी लगाउँने आशंकाकै विच चिनले दियो खुशिको खबर !!
चिनबाट नेपालीका लागी खुशी`को खबर आएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार आइरहेको बेला कतिपयले इण्डीयाले नेपाल माथी आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँन सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् यसै बेला रसुवागढी केरुङ नाका खोल्न चीन सहमत भएको छ । चीनले रसुवागढी नाकाबाट हुने आयातलाई सुचारु गर्ने विषयमा सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा द्विपक्षीय व्यापार महा`शाखाका प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
‘नाका खोल्ने विषयमा उहाँहरुबाट सहमति प्राप्त भयो । अब दुवै देशका स्थानीय निकायहरु बसेर कसरी त्यसलाई खुला गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छन् । त्यो छलफल टुंगिएपछि कारोबार सुचारु हुन्छ’ सहसचिव ढकालले भने ।त्यो प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याएर आयात निर्यातलाई सुचारु गर्न चाहे पनि चीनको तर्फबाट केही प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकोले यसलाई पर्खेर बसेको समेत उनले बताए ।
केरुङ नाका खुल्ने भएपछि अहिले व्यापा`रीहरु उत्सा`हित भएका छन् । उनीहरु नाका सुचारु भएलगत्तै सीमापारी रोकिएका सामान ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । अहिले सो नाकाबाट नेपाल भित्रिन तयारी अवस्थामा करिब १ हजार कन्टेनर रहेको राष्ट्रिय व्यापार महासंघका अध्यक्ष नरेश कुटवालले बताए ।
भोलि नै म`र्दैछु भनेर बाँच, सधैभरी बाँच्छु भनेर केही सिक – ‘गान्धी’